Amadivayisi we-Ultrasonic Nokusetshenziswa Kwazo - I-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Amadivayisi we-Ultrasonic kanye Nesicelo Sawo"
Amadivaysi e-ultrasonic axhambanisa amagagasi amakhulu e-ultrasound abe yiziphuzo kanye nama-slurries ukuze ahlaziye, ahlakazeke, aphume emulsify, u-extractor ukuze aqale ukusabela kwamakhemikhali. Ukudlidliza kwe-low-frequency, high intensity ultrasound kudluliselwa nge-sonotrode (eyaziwa nangokuthi i-probe ye-ultrasonic, uphondo, noma i-tip) ngaphakathi ukuze kube khona i-acoustic cavitation. Emkhakheni we-power-dense cavitation field high pressure kanye nokushisa okuhlukile, amabutho aphezulu we-shear kanye ne-turbulences yizona ezithintekayo, ezikhuthaza ukuhlanganiswa, ukuhlukaniswa kwamaconsi, ukuphazanyiswa kwamangqamuzana nokudluliswa kwamanzi.
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza izinhlelo ezinamandla ze-ultrasonic zebhu, ibhentshi-phezulu kanye nomkhakha. Funda kabanzi mayelana nezinhlelo zokusebenza zethu zokusebenza eziphezulu kakhulu ze-ultrasonic!